लकडाउनको बेला एउटा भर्चुअल कार्यक्रममा राजनीतिशास्त्री तथा अध्येता हरि शर्मालाई पठन सम्बन्धी प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अवधिमा पढ्नको लागि त्यति उत्सुकता नबढेको र स्वतन्त्रता खोसिएको अनुभव भएको छ ।’ सम्भवत धेरैलाई उकुसमुकुस नै भएको हुनुपर्छ । मेरो अनुभूति पनि यस्तै छ ।
यहीबीच नेपाली साहित्यको बजारमा अखबारी लेखनमा नाम चलेकी लेखिका सरल गौतमको ‘डुमेरो’ प्रकाशित भयो । पत्रकारिताबाट उपन्यासकारको रूपमा अवतरित गौतमको पुस्तकको नाम नै अर्थ खोज्नुपर्ने खालको छ ।
यात्राबाट अभिप्रेरित लामा–लामा आलेखको नियमित पाठक भएको र साहित्यमा रुचि भएकाले पनि मलाई ‘डुमेरो’ पढ्ने जाँगर चल्यो । लकडाउनको बेला खुद्रा लेखपढ गरे पनि सिंगो पुस्तक चाहिँ ‘डुमेरो’ नै पढेर सकाए । पुस्तकमा मेरो पुस्ताको दिल छामेर लेखिएका हरेक अनुच्छेद स्वतन्त्रताका बिगुल नै हुन् ।
जुन समयमा लेखिकाले जिन्दगी भोगेकी छिन्, त्यही समय नै पुस्तक हो । पात्र र अभिव्यक्ति सिनेमाकी नायिकामार्फत व्यक्त भए पनि त्यो हाम्रो पुस्ताको कथा हो । त्यही भएर पुस्तक सरल छ, तरल छ र बगेको छ । पुस्तकमा झर्को छैन । आफैंले लेख्न खोजेझैं छ, आफ्नै कुरा छ, उन्मुक्त हाँसो पनि छ, अडान छ, कतै खस्रो छ, आधुनिक छ, भित्र–बाहिर एउटै छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो स्वतन्त्रताको उडान अति नै लोभलाग्दो छ ।
पुस्तकमा भूमिका छैन । मालिकहरूको उर्दी पनि छैन । कसैले भनिदिएको राम्रो र नराम्रो छैन । पाठकलाई भूमिका लेख्न दिएझैं छ । सोझै छ कुरो, लप्पनछप्पन छैन । मानकहरू भत्किएका छन्, त्यसमा मजा छ । शहरमा नाम चलेको भनिएको ‘मान्छे’को हस्ताक्षर विना पनि पुस्तक लेखिन्छ, बिक्री हुन्छ, पढिन्छ, पढेर खुशी लाग्छ, केही सिकिन्छ, केही प्राप्त गरिन्छ । सरला गौतममार्फत दुनियाँका नयाँ मान्छेहरू र ‘ग्रीन’ मान्छेहरूले सन्देश पाएका छन् ।
पुस्तकका पात्र रुपक दा, सुप्रिया, रियाज, अभि, ब्रुनो, नताशा, समा, सोनम, सिमरन, बाबाआमा, फुपू दिदी, अमेरिकन साथीहरू, सिनेमा मालिकहरू, सबै जना हरेक पाठकका साथीहरू हुन् । पात्रहरूको जुन प्लट छ, जहाँबाट उनीहरू एक ठाउँमा हुन्छन् र जहाँबाट अलग हुन्छन्, हरेक आदि र अन्त्यमा जीवन छ, अर्थपूर्ण छ ।
रियाजको मृत्यु सत्य हो तर रियाज बचेकै भए हुन्थ्योझैं लागिराखेको छ । नाताशा कस्तो सम्यक, कस्तो आँटिलो मान्छे । ब्रुनोले एक नेपाली हिरोइनलाई जसरी घुमायो, त्यो पनि अचम्म छ तर कुरो पछि थाहा लाग्छ ।
डुमेरोको उमेर हाराहारीको मेरो छोरा छ । उसले जीवनमा पहिलो पटक यही पुस्तक सुम्सुम्यायो । पाना पल्टायो । पुस्तकको कभरमा आँखा लगायो र रमायो पनि । यसरी बुवा अमृत र छोरा अथर्ब मिलेर ‘डूमेरो’मा डुमेरो लगाए । मलाई यो कुरा भन्न पाउँदा पनि खुशी लागेको छ । सरला गौतमलाई अखबारमा पढेको, टिकटकमा हेरेको, अन्तर्वार्ता सुनेको, लाइभ हेरेको र सुनेको, उहाँका अभियान र साहसिक अभिव्यक्ति पढेको हुनाले पनि होला म कतै पक्षपाती भएर पढ्छु कि झैं लागेको थियो । तर पुस्तकले त्यसो गर्ने अनुमति दिएन, तटस्थ राखिदियो ।
म समीक्षक होइन, लेखक होइन, टिप्पणीकार पनि होइन र म कर्मचारी पनि होइन । तर म पाठक हुँ, इमान्दार भएर अक्षर, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, पेज, पाठ र पुस्तकले के भन्न खोजेको छ भन्ने बुझ्न खोज्ने र पुस्तकको प्रशंसा गर्ने मान्छे चाहिँ हुँ । यसरी मैले जे बुझें, जे पाएँ, जसरी सिञ्चित भएँ, बगे र पात्रले मलाई जसरी ‘ह्याङ्ग’ गराएका छन्, त्यो सबै हेर्दा यत्ति भनौं – ‘डुमेरो’ स्वादिलो भोजन बराबर छ ।
डुमेरो आजको दुनियाँको युवापुस्ता र संघर्षशील हरेकको कथा हो । भलै पर्दाकी नायिकामार्फत कथालाई अभिव्यक्त गरेकी छिन् लेखकले । उनले बुझाएकी छन् कि पर्दामा चमकधमक देखिए पनि उनीहरूका कठिन समयहरू र अप्ठ्यारो यात्रा सँगसँगै छ । तपाईं जुनसुकै पेशा रोज्नुस्, त्यसको पछाडि सहजता मात्र छैन, सफलताको चुस्की मार्न कति पटक पछारिनुपर्छ भन्ने आजको युवा पुस्ताले भोगिरहेको छ ।
पढ्नु, बोल्नु, लेख्नु र समुदायको आवाज बाहिर ल्याउनु, त्यसको प्रतिफल उल्टै आरोपित हुनु, एक्लो बनाइनु त अहिलेको समाजको नियम जस्तै हुन लाग्यो । तर ‘डुमेरो’मार्फत सोनम र सुप्रियाले कठिनाइ भोगे पनि स्वतन्त्रताको लगामलाई अस्वीकार गरिरहे । सोनामले मन, वचन, यौवन, हाँसो, आँसु, खुशी सबै–सबै साटेको प्रेमीसँग शब्दको कारणले ‘गूड–बाई’ गर्न तयार भइन् । आफू आफू जस्तो रहन पाउनुपर्ने, उन्मुक्त रहेर जिन्दगी चलाउने जुन अपिल छ, डुमेरोमा त्यो सन्देश सबैभन्दा बलियो छ ।
आज पनि दुनियाँमा हाम्रा दिदीबहिनी र छोरीहरूमाथि स्वयं हामीले नै ‘सांस्कृतिक हतियार’ बिस्फोट गराएर आतंक छरेका छौं । अनुशासनका नाममा उत्कट अभिलाषाहरू, समवयीहरू सँगको संगत, स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ भन्ने अनुभूतिबाट वञ्चित गराउने समाज हाम्रो अघिल्तिर छ । आफ्ना सीमाहरू सोही व्यक्तिलाई तोक्न दिने समाज कहिले निर्माण होला ? चेतना कहिले बदलिएला ? ‘डुमेरो’मा झैं कल्पना गरेको दुनियाँ आउन समय त लाग्ला नै अपितु यो पुस्तक पढेका तन्नेरीहरूले नयाँ आयामबाट पनि सोच्न सक्ने चाहिँ अवश्य हुन्छन् ।
आफ्नो निजी जिन्दगी, खुशी, सुन्दर सपना, मिठो साथ–संगति, सबै–सबै कुरामा डराएर केवल भविष्य खोजिरहेका युवालाई आफूतर्फ फर्क, कर्ममा तल्लिन होऊ, जिम्मेवार बन तर स्वतन्त्र बन, बिन्दास बन भन्ने संकेत छ डुमेरोमा । यही कुरा सत्यम् शिवम् सुन्दरम् छ ।
साहित्यको नजरले यसका वादहरू, उपमाहरू, बान्की, ढाँचा, सूत्र आदिको कसीमा ‘डुमेरो’ के कस्तो छ ? त्यो कि सरला गौतमलाई थाहा होला वा ‘कापी–परीक्षक’लाई थाहा होला । तर म जस्तो पाठकको लागि ‘डुमेरो’को पठन समय सुन्दर रह्यो । एउटा पाठकको लागि पुस्तक पढुञ्जेल, त्यसले तान्यो कि तानेन, मथिंगलले केहीबेर थप सोच्यो कि सोचेन, पात्रहरूले पाठकसँग सजीव सम्बन्ध राखे कि राखेनन् भन्ने विषय अहम् विषय हो । यो कसीमा ‘डुमेरो–बसाइ’ पात्र–पाठकको मिठो संवादको रूपमा रह्यो ।
स्वतन्त्रताको कुरा गर्नेहरूले, महिलाको कुरा गर्नेहरूले, नयाँको कुरा गर्नेहरूले, पाका र अभिभावकहरूले तथा मेरा पुस्ताका पाठकहरू सबै–सबैले पुस्तक पढून् । सरलाले लेखिरहून् । जस्तो छ जिन्दगी, धमाकेदार बनोस्, कुनै दिन पुस्तकमा हस्ताक्षर लिउला ।
वरिष्ठ चलचित्रकर्मी कार्कीको निधन